OTU ESI EMELITE UTORRENT - UTORRENT - 2019
Mgbe ị na-amalite na HP laptọọpụ ụfọdụ n'ọnọdụ ụfọdụ, njehie nwere ike ime "Echọtaghị Ngwa Ọkụ", nke nwere ọtụtụ ihe kpatara ya na, ya mere, ụzọ nkwụsị. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha akụkụ nile nke nsogbu a n'ụzọ zuru ezu.
Njehie "Enweghi Achọpụta Boot"
Ihe kpatara njehie a gụnyere ntọala BIOS na-ezighị ezi na odida ike mbanye. Mgbe ụfọdụ, nsogbu nwere ike ime n'ihi nnukwu mmebi nke faịlụ Windows.
Usoro 1: Ntọala BIOS
N'ọtụtụ ọnọdụ, karịsịa ma ọ bụrụ na a kwụrụ laptọọpụ n'egbughị oge, ị nwere ike idozi njehie a site n'ịgbanwe ntọala pụrụ iche na BIOS. A pụkwara itinye ihe omume ndị ọzọ na ụfọdụ laptọọpụ ndị ọzọ site na ndị nrụpụta dị iche iche.
Nzọụkwụ 1: Ntinye Okike
Mepee BIOS ma gaa na taabụ site n'elu menu. "Nchebe".
Gụkwuo: Otu esi emepe BIOS na laptọọpụ HP
Pịa na akara "Setịpụ Ntuziaka Nlekọta" na window meghere mejupụta ma ubi. Cheta ma ọ bụ detuo paswọọdụ eji, ebe ọ ga-adị mkpa n'ọdịnihu iji gbanwee ntọala BIOS.
Nzọụkwụ 2: Gbanwee Ntọala
Pịa taabụ "Nhazi usoro" ma ọ bụ "Bọọ" wee pịa akara "Nhọrọ Nhọrọ".
Gbanwee uru na ngalaba "Ntọala Ntụkwasị Obi" na "Gbanyụọ" jiri ndepụta ndepụta.
Rịba ama: N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe nwere ike ịdị na otu taabụ.
Pịa na akara "Kpochapụ Igodo Igodo Ntụkwasị Obi" ma ọ bụ "Ghichapụ ihe niile echedoro".
Na windo meghere na akara "Tinye" tinye koodu si igbe "Usoro Ntugharị".
Ugbu a, ị ga-agbanwe uru ahụ "Nkwado na-akwado" na "Kwadoro".
Tụkwasị na nke a, ị kwesiri ijide n'aka na disk diski nọ n'ọnọdụ mbụ na ndepụta ndetu ihe.
Leekwa: Otu esi eme ka diski diski ike
Rịba ama: Ọ bụrụ na BIOS ahụghị ihe nchekwa ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ozugbo.
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa igodo ahụ "F10" iji zọpụta ọnụọgụ abụọ.
Ọ bụrụ na mgbe ịmechara nkọwa ahụ omume njehie ahụ nọgidere, ọ ga-ekwe omume na nsogbu ndị ka njọ.
Ebe ọ bụ na diski ike laptọọpụ bụ otu n'ime akụkụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, njigide na-adabere n'ọnọdụ ndị na-adịghị ahụkebe ma na-ejikọta ya na nlekọta na-ekwesịghị ekwesị nke laptọọpụ ma ọ bụ ịzụta ngwaahịa na ụlọ ahịa ndị a na-achọghị. Njehie n'onwe ya "Echọtaghị Ngwa Ọkụ" gosiputara HDD, ya mere ọnọdụ a ka nwere ike.
Nzọụkwụ 1: Ikwusi laptọọpụ
Nke mbụ, gụọ otu n'ime ntụziaka anyị ma gbasaa laptọọpụ ahụ. Nke a dị mkpa iji chọpụta àgwà njikọ njikọ diski.
Gụkwuo: Otu esi kwadaa laptọọpụ n'ụlọ
Otu ihe dị mkpa maka mgbanwe nke HDD, n'ihi nke a na-atụ aro ka ịchekwa ndọtị niile.
Nzọụkwụ 2: Lelee HDD
Mepee laptọọpụ ma chọpụta kọntaktị maka mmebi anya. Lelee ihe dị mkpa na waya jikọtara HDD njikọ na laptọọpụ motherboard.
Ọ bụrụ na o kwere omume, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ijikọ ọkpụkpọ ike ọ bụla iji jide n'aka na kọntaktị na-arụ ọrụ. Ọ ga-ekwe omume ka ị jikọọ HDD site na laptọọpụ na PC iji chọpụta ọrụ ya.
Gụkwuo: Otu esi jikọọ diski ike na PC
Nzọụkwụ 3: Ndogharị HDD
Mgbe ị na-elele draịvụ ike ahụ mgbe ọ na-ada mbà, ịnwere ike ịgbalị ime mgbake site n'ịgụ ntụziaka na otu n'ime isiokwu anyị.
Gụkwuo: Otu esi enwetaghachi diski ike
Ọ dị mfe ịzụta nnukwu draịvụ kwesịrị ekwesị ọ bụla na ụlọ ahịa kọmputa ọ bụla. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ịnweta ụdị ozi ahụ, nke arụnyere na kọmpụta na mbụ.
Usoro nhazi nke HDD anaghị achọ nkà pụrụ iche, ihe bụ isi bụ ijikọ ya na idozi ya. Iji mee nke a, gbasoo nzọụkwụ na nzọụkwụ mbụ na ntụgharị usoro.
Gụkwuo: Gbanyụọ diski ike na PC na laptọọpụ
N'ihi mgbasa ozi zuru oke, nsogbu ahụ ga-apụ n'anya.
Nzọụkwụ 3: Tinyegharịa usoro ahụ
N'ihi imebiri faịlụ faịlụ, dịka ọmụmaatụ, n'ihi ikpughe na nje, nsogbu a nwekwara ike ime. Ị nwere ike iwepu ya na nke a site na ịtinye usoro sistemụ ahụ.
Gụkwuo: Otu esi wụnye Windows
Usoro a bara uru ma ọ bụrụ na achọpụta diski ike na BIOS, ma ọbụlagodi mgbe ị gbanwegharịrị na njedebe, ozi ka na-egosi na otu njehie. Ọ bụrụ na o kwere omume, ịnwere ike ịmebe ọkwà ma ọ bụ mgbake.
Otu esi weghachite usoro site na BIOS
Otu esi arụzi Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Anyị nwere olileanya na mgbe ị gụsịrị ntụziaka a, ị jisiri ike wepu njehie ahụ. "Echọtaghị Ngwa Ọkụ" na laptọọpụ larịị HP. Maka azịza nke ajụjụ ndị a na-abata na isiokwu a, biko kpọtụrụ anyị na ihe ndị a.